サイトマップ│世界の仮想通貨･暗号通貨･新国際デジタル通貨 グローバルポータルウェブサイト ｜GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ကြိုး(Tether –; USDT)
တိတ်ဆိတ်(Ripple –; XRP)
Bitcoin ငွေသား(Bitcoin Cash –; BCH)
ကွင်းဆက်လင့်(Chainlink –; LINK)
Binance အကြွေစေ့(Binance Coin –; BNB)
Crypto.com ကွင်းဆက်(Crypto.com Coin –; CRO)
အလင်းရောင်အကြွေစေ့(Litecoin –; LTC)
カルダノ[エイダ](Cardano –; ရှိသည်)
အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့(USD Coin –; USDC)
OKコイン[オーケーコイン](OKEX Coin –; ကုလသမဂ္ဂ)
လီယို[レオ トークン](UNUS SED LEO Token –; လီယို)
F2f အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု Bitcoin block ကွင်းဆက်
世界の仮想通貨･暗号通貨･新国際デジタル通貨 グローバルポータルウェブサイト ｜GVMG –; ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Cryptocurrency-Virtual ငွေကြေးစာရင်း | စတော့ရှယ်ယာများစာရင်း | အမျိုးအစားအားဖြင့် Altcoin အမည် - အကျဉ်းချုပ်
Bitcoin(Bitcoin / BTC) အသွင်အပြင်|စျေး / စျေးနှုန်း|ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဇယား|ဘယ်လိုဝယ် / ဝယ် / လဲလှယ်ဘယ်လို|အရောင်း / အရောင်းရုံးစာရင်းပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်
Ethereum(Ethereum –; ETH) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
ကြိုး(Tether –; USDT) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
တိတ်ဆိတ်(Ripple –; XRP) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
ကွင်းဆက်လင့်(Chainlink –; LINK) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Bitcoin ငွေသား(Bitcoin Cash –; BCH) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Binance အကြွေစေ့(Binance Coin –; BNB) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Crypto.com ကွင်းဆက်(Crypto.com Coin –; CRO) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အလင်းရောင်အကြွေစေ့(Litecoin –; LTC) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Bitcoin SV(Bitcoin-SV –; BSV) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Cardano <Ada>(Cardano –; ရှိသည်) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
os(EOS) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့(USD Coin –; USDC) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Tron(Tron –; TRX) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Neo(NEO) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အိုကေအကြွေစေ့ <OK အကြွေစေ့>(OKEX Coin –; ကုလသမဂ္ဂ) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Tezos(Tezos –; XTZ) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Monero(Monero –; XMR) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
Stella(Stellar –; XLM) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
လီယို(UNUS SED LEO Token –; လီယို) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ｜ စျေး / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် ｜ ၀ ယ်ယူခြင်း / ကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်း ｜ လဲလှယ်ခြင်း / အရောင်း / လဲလှယ်စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အဆိုပါ bit နဲ့အကြွေစေ့? တစ်ဦးကပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်?
စာမျက်နှာ update ကိုအသိပေးချက် "Bitcoin(Bitcoin / BTC) အင်္ဂါရပ်များ / ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ|စျေး / စျေးနှုန်း|ဘယ်လိုဝယ် / ဝယ် / လဲလှယ်ဘယ်လို|အရောင်း / အရောင်းရုံးစာရင်းပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များအကျဉ်းချုပ် "
©မူပိုင်ခွင့် 2020 ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး / Cryptographic ငွေကြေး / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ၀ ဘ်ဆိုဒ်